KỌMPUTA NA-AGBANYE MA GBANYỤỌ OZUGBO - N'IHI BEGINNERS - 2019
Otu n'ime nsogbu ndị nkịtị na kọmputa bụ na ọ na-agbanye ma gbanyụọ ozugbo (mgbe nke abụọ ma ọ bụ abụọ). Ọ na-adịkarị ka nke a: ịpị bọtịnụ ike malitere usoro nke ịgbanwuo, ndị fans niile amalite ma mgbe obere oge kọmputa kwụsịrị kpamkpam (mgbe ọ na - esiteghị na bọtịnụ ahụ ike anaghị agbanye kọmputa ahụ ma ọlị). Enwere nhọrọ ndị ọzọ: dịka ọmụmaatụ, kọmputa ahụ agbanyụrụ ozugbo ọ gbanyechara, ma mgbe agbanyere ya ọzọ, ihe nile na-arụ ọrụ nke ọma.
Ntuziaka a na-akọwa ihe ndị kachasị akpata ihe omume a na otu esi edozi nsogbu ahụ site na ịgbanye PC. O nwekwara ike ịba uru: Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị agbanye.
Rịba ama: tupu ị gawa, ṅaa ntị, ma ọ bụrụ na i nwere bọtịnụ na / gbanyụọ na njikọ usoro - nke a, kwa (na ikpe ahụ abụghị ihe ọhụrụ) nwere ike ịkpata nsogbu ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-agbanye kọmputa mgbe ị hụrụ ngwaọrụ USB n'iji ọkwa dị ugbu a chọpụta, ihe ngwọta dị iche maka ọnọdụ a bụ: Otu esi arụzi eriri USB dị ugbu a maka 15 sekọnd.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ mere mgbe ikpọ ma ọ bụ nhichaa kọmputa, dochie motherboard
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ ma gbanyụọ kọmputa ozugbo ịgbanwụrụ na-apụta na PC ahụ a kpọkọtara ọhụrụ ma ọ bụ mgbe ị gbanwechara components, ihuenyo POST adịghị egosipụta mgbe agbanwuru (ya bụ, ma ọ bụghị akara BIOS ma ọ bụ data ọ bụla ọzọ egosipụta na ihuenyo) ), nke mbụ jide n'aka na ị jikọtara ike nke nhazi ahụ.
Ike ọkọnọ site na ike ọkụ na motherboard na-agakarị site na abụọ loops: otu bụ "obosara", nke ọzọ dị warara, 4 ma ọ bụ 8-pin (nwere ike ịkpọ ATX_12V). Ma ọ bụ nke ikpeazụ na-enye ike na processor.
Na-enweghị jikọọ ya, omume nwere ike ịme ngwa mgbe kọmputa kwụsịrị ozugbo ọ gbanyechara, ka nyocha ihuenyo nọgidere na-acha oji. N'okwu a, na njikọ njikọ 8 ntinye site na ike ọkọnọ, a nwere ike ijikọ njikọ abụọ nwere ike jikọọ na ya (nke "ezukọtara" n'ime njikọ 8-pin).
Nhọrọ ọzọ nwere ike ime bụ imechi motherboard na ikpe ahụ. O nwere ike ime n'ihi ihe dịgasị iche iche, ma burugodị ụzọ hụ na motherboard na-etinye aka n'osisi ahụ na-ebuba ihe ndọtị ma na-ejikọta ha na oghere ndị na-arị elu nke motherboard (nke nwere kọntaktị dị iche iche maka ịkụda osisi ahụ).
N'ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na ị kpochara kọmputa site na ájá tupu nsogbu ahụ apụta, gbanwere griiz ma ọ bụ ngwa nju oyi, nyocha ahụ gosipụtara ihe mgbe mbụ ịgbanwu (ihe mgbaàmà ọzọ - mgbe mbụ ịgbanwụrụ kọmputa anaghị agbanyụ ogologo karịa ndị na-esote), mgbe ahụ nwee nnukwu ihe ịga nke ọma i mere ihe na-ezighi ezi: o yiri ka ekpochapu ọkụ.
Nke a nwere ike ime site na ikuku nke ikuku n'agbata radiator na mkpuchi usoro, akwa akwa nke mgbochi ọkụ (na mgbe ụfọdụ, ị ga-ahụ ọnọdụ ebe e nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ihe nkwụnye akwụkwọ na radiator ma tinye ya na nhazi ya).
Rịba ama: ụfọdụ griiz na-emepụta ọkụ eletrik na, ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe na-ekwesịghị ekwesị, nwere ike imechi kọntaktị na nhazi ahụ, n'ọnọdụ a, ọ ga-ekwe omume na enwere nsogbu na ịgbanwuo kọmputa. Lee otu esi etinye ihe gri.
Ihe ndị ọzọ iji lelee (ma ọ bụrụ na ha etinye aka na ikpe gị):
Ma ekiri kaadị vidiyo (mgbe ụfọdụ a na-achọ mgbalị), ma agbakwunye ike ọkọnọ ọzọ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa).
Ị na-elele nsonye ya na otu ogwe RAM na oghere mbụ? Enwere ntinye RAM nke ọma?
Enwere arụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ụkwụ gbuwere ya?
Ọ bụ onye nlekota CPU ntinye n'ime?
Enwere ike ijikọ aka n'ihu nke usoro usoro ahụ?
Ndi nne na nna gi na BIOS na-emegharia ihe nhazi (ma oburu na CPU ma obu motherboard agbanweela).
Ọ bụrụ na ị wụnye ngwaọrụ SATA ọhụrụ (disk, draịva), lelee ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ na-adịgide ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ ha.
Kọmputa malitere ịgbanwuo mgbe agbanyere na-enweghị ihe ọ bụla n'ime ikpe ahụ (tupu nke ahụ emee nke ọma)
Ọ bụrụ na arụ ọrụ ọ bụla metụtara mmeghe ahụ ma kwụpụ ma ọ bụ jikọọ ngwa ahụ emeghị, nsogbu ahụ nwere ike kpatara site na isi ihe ndị a:
Ọ bụrụ na kọmputa ahụ zuru oke - ájá (na circuit), nsogbu na kọntaktị.
Akwụsị ike ọkọnọ (otu n'ime ihe ịrịba ama na nke a bụ ikpe - tupu kọmputa agbanyeghị na mbụ, ma nke abụọ ruo nke atọ, wdg, enweghi njirimara BIOS maka nsogbu, ọ bụrụ na ha nọ, lee. nsonye).
Nsogbu na RAM, kọntaktị na ya.
Nsogbu BIOS (karịsịa ma ọ bụrụ na emelitere), gbalịa ịtọgharịa BIOS motherboard.
Obere oge, enwere nsogbu na motherboard n'onwe ya ma ọ bụ na kaadị vidiyo (n'ikpe ikpe a, m nwere ike ikwu, n'ihu ọnụ mgbagwoju anya vidiyo, wepụ vidiyo vidiyo ahụ ma jikọta nyochaa na mmepụta ihe).
Nkọwa maka isi ihe ndị a - na ntụziaka Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa anaghị agbanye.
Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịnwale nhọrọ a: gbanyụọ ngwa niile ma e wezụga onye nhazi na ngwa nju oyi (ntụgharị, wepụ RAM, kaadị vidiyo doro anya, kpochapụ disks) ma gbalịa gbanye kọmputa: ọ bụrụ na ọ na - agbanye ma ghara gbanyụọ (na, dịka ọmụmaatụ, beeps - na nke a nke a bụ ihe nkịtị), mgbe ahụ i nwere ike iwunye components otu oge (oge ọ bụla ị na-enyocha kọmputa tupu nke a) iji chọpụta onye na-ada ada.
Otú ọ dị, n'ihe banyere ike ọkpọ nsogbu, ụzọ a kọwara n'elu nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ụzọ kachasị mma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, bụ ịgbanye kọmputa yana onye ọzọ, na-eme ka ike nweta ọrụ.
N'ọnọdụ ọzọ - ọ bụrụ na kọmputa agbanye ma gbanyụọ ozugbo mgbe mgbochi nke Windows 10 ma ọ bụ 8 (8.1), na ọrụ nrụgharia na-enweghị nsogbu, ịnwere ike ị gbanyụọ Windows Quick Start, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, lezie anya ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala mbụ niile na saịtị ahụ nne na-arụ ọrụ.